Momba anay - SUYI IMPORT AND EXPORT CO., LTD
Tsara ny tolakandro, avelao aho hampahafantatra ny tenako.
Ny biraonay dia miorina any atsimon'i Sina ao an-tanànan'i Yiwu, ivon'ny famokarana sy ny varotra manerantany, izay ahafahantsika mamaha haingana sy mahomby ireo lahasa napetraky ny mpanjifanay. Manana trano fanatobiana entana koa izahay ao amin'ny tanànan'i Yiwu, Guangzhou, Moskoa
Ny orinasantsika dia mandray anjara amin'ny fampirantiana lehibe maro hahafahana mahatakatra ny tsena sy manaraka ny fironana vaovao. Amin'ny asanay dia mampiasa zotram-pitaovana manokana izahay, teknolojia havaozina sy fitaovana fifandraisana.
Amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminay dia azonao atao ny:
- Serivisy feno ho an'ny fiaraha-miasa amin'i Shina
- Ny làlana rehetra azo ampiasaina sy ny fomba fandefasana entana avy any Shina
- Ny taha ambony indrindra amin'ny tsena
- Vahaolana lozisialy ho an'ny mpanjifa tsirairay
-Ny vahaolana ara-barotra sy ara-toekarena ho an'ny mpanjifa tsirairay
- Fandaharam-potoana matetika handefasana entana misy vondrona isan-kerinandro: fiara 3-4 heny, ranomasina 1-2 heny, rivotra in-5, maneho isan'andro
- Fampiasana trano fitehirizana malalaka any Shina
- Fakan-kevitra maimaimpoana amin'ny fiaraha-miasa amin'i Sina
- Solontena malalaka any Shina hanampy anao hiaro ny tombontsoanao amin'ireo mpamatsy na mpiara-miasa sinoa anao
Tsy mila mandany fotoana sy ezaka amin'ny fikarohana vokatra ianao ary mifandray amin'ny mpamatsy sinoa. Afaka manome anao safidy safidy maromaro avy amina mpanamboatra samihafa izahay, indray mandeha, manafatra santionany, ampitahao ny kalitao sy ny vidiny. Ary koa serivisy lozisialy mitambatra. Faly izahay hiara-miasa aminao. Safidio ny "SUYI", safidio ny fandresenao. Ny mpiasa SUYI rehetra dia mirary fahasalamana sy fahombiazana amin'ny asanao.
Nahavita asa lehibe izahay mba hanomezana ny fepetra tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay.
10 taona eo amin'ny tsena
SERVICES MAHAY MAHASOA
Niasa tamin'ny tsenan'ny fitaterana entana izahay hatramin'ny 2010. Nandritra ny 10 taona niasana dia nanao asa lehibe izahay hanomezana ny fepetra sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay.
Amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminay dia afaka mahazo serivisy varotra, toekarena ary fitaterana an-tsokosoko ianao amin'ny fiaraha-miasa amin'i Sina.
Manome serivisy iray izahay, ary ny mpitantana anay dia vonona mandrakariva hamolavola vahaolana lozisialy natokana ho anao.
HANAMPY Hividy VONDRAM-BAROTRA TSARA ATY CHINA AMIN'NY MPANORATRA